သတင်း - 3M light box အထည်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အားသာချက်များ ၄
3M သည်ကြော်ငြာနှင့်ဆိုင်းဘုတ်လုပ်ငန်းအတွက်ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကိုပံ့ပိုးပေးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အတူရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများစွာရှိခဲ့သည်။ အောက်ပါသည် 3M light box film ၏အားသာချက်လေးချက်ကိုမိတ်ဆက်ပြီးသုံးစွဲသူအများစုကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
1. 3M light box film, high-end photo inkjet light box ၏ဤအမျိုးအစားသည်အပြင်ဘက်ရာသီဥတုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပုံသွင်းရုပ်ရှင်သည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲအိုမင်းရင့်ရော်မှုနှင့်ကျုံ့ဆန့်ကျင်မှုကဲ့သို့ပြည့်စုံသောရှုထောင့်များပါ ၀ င်သောအထူး 3M အလင်းသေတ္တာအ ၀ တ်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ အမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူများသည်ငါးနှစ်ပြည့်စုံသောအရည်အသွေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီးအရည်အသွေးအာမခံချက်ပေးနိုင်သည်။
၂။ 3M light box film သည်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများနှင့်ပြင်ပအင်အားများကိုပြင်းထန်စွာခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းကိုကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိအဓိကအသုံးပြုသူများမှစမ်းသပ်ပြီးအတည်ပြုခဲ့သည်။ ပေါ့ပါးသောအ ၀ တ်သည်အပြားလိုက်ဆန့်ထုတ်ပြီးနောက် elasticity ၏အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေသေးသဖြင့်၎င်းသည်အချို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားပြင်ပသို့ ၀ င်သောအခါ acrylic ကဲ့သို့ကွဲရန်လွယ်ကူသည်။
၃. 3M အလင်းရောင်အကွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတည်ဆောက်မှုသည်အဆင်ပြေပြီးဆောက်လုပ်ရေးကာလတိုသည်။ ရုပ်ရှင်အလင်းဖျင်ကပ်ရန်နည်းလမ်းသည်အတော်ဆုံးအရိုးရှင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထူးဆွဲကြိုး၊ ဘောင်ပေါ်ရှိအလင်းသေတ္တာမျက်နှာပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းတင်းကျပ်ရန်သာလိုအပ်သည်။ တည်ဆောက်ချိန်သည်နာရီအနည်းငယ်ကြာသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပြီး site တည်ဆောက်ရေးအချိန်အများကြီးကိုကယ်တင်နိုင်သည်။
4. 3M အလင်းရောင်ဘောက်စ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၏ဓာတ်ပုံလေဖြန်းပန်းချီသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။ သာမန်ပလတ်စတစ်စုပ်ယူမှုပုံစံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ မှိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ်စုပ်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုချန်လှပ်ထားပြီးပြည့်စုံသောယူနစ်စျေးနှုန်းသည်အခြားနည်းလမ်းများထက်သိသိသာသာနိမ့်သည်။ ဤနည်းလမ်း၏ရေရှည်ပြင်ပရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုထည့်သွင်းပါက ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းအရခွဲဝေထားသောယူနစ်စျေးနှုန်းသည်နိမ့်သည်။
3M light box film ၏အားသာချက်များကိုအပေါ်မှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်ရုပ်ရှင်နှင့်အလင်းဖျင်၏ဂန္ထဝင်နည်းလမ်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ လည်ပတ်မှုလွယ်ကူခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစည်းမှုစံသတ်မှတ်ချက်တို့နှင့်တူညီသည်ကိုမြင်ရန်မခက်ပါ။